Kenya iyo Somaliland oo maanta heshiis kala saxiixday | Dhacdo
Home Wararka Maanta Kenya iyo Somaliland oo maanta heshiis kala saxiixday
Kenya iyo Somaliland oo maanta heshiis kala saxiixday
Madaxweynayaasha Kenya iyo Somaliland, Uhuru Kenyatta iyo Muuse Biixi Cabdi ayaa war-murtiyeed ka kooban 10 qodob ka soo saaray wadahadallo ay ku yeesheen magaalada Nairobi, kadib markii Kenya ay casuumad rasmi ah u fidisay madaxweynaha Somaliland.
Qoraalka ayaa lagu yiri “Labada Madaxweyne waxay xusayan, ayaga oo si aad ah ugu qanacsan, in iskaashiga ka dhexeeya Kenya iyo Somaliland uu salka ku hayo mabaadi’ iyo qayim ay wadaagaan oo ujeedkoodu yahay kobcinta nabad waarta, xasillooni, koritaan joogto ah iyo barwaaqo wadaag ah. Ayada oo ay quseyso arrintan, waxay ballanqaadeen inay xoojiyaan, oo ay sii dheereeyaan iskaashiga u dhexeeya Kenya iyo Somaliland.”
Qoraalka ayaa intaas ku daray in labada hoggaamiye ay wadahadaladooda diiradda ku saareen ballaarinta xiriirka ganacsi, sare u qaadaista wada-shaqeynta xagga duulimaadyada, oo ay ku jirto ogolaanta duuliimaadyo toos ah oo u dhaxeeya Nairobi iyo Hargeysa iyo ka wada-shaqeynta horumarinta beeraha, xoolaha, waxbarashada, tamarta iyo iskaashiga Dekedaha Berbera iyo Mombasa.
Labada Madaxweyne ayaa isku raacay jadwal ay ku fulinayaan qodobo dhowr ah oo ay ku heshiiyeen, waxaana ugu weyn in Kenya ay qunsuliyad ka furato Magaalada Hargeysa, ka hor dhammaadka bisha March ee 2021, ayada oo Somaliland-na ay casriyeyneyso xafiiskeeda xiriirka ee Nairobi, isla waqtigaas.
Labada Madaxweyne ayaa sidoo kale xaqiijiyey inay mas’uuliyad ka saarantahay xaqiijinta amniga iyo xasilloonida gobolka, si ay taasi ugu ogolaato shacabka inay raadsadaan horumarka dhaqaalaha bulshada iyo xasilloonida.
“Ayada oo ay quseyso arrintan labada hoggaamiye waxay isla qireen in Somaliland ay sanado badan aheyd nabad iyo xasillooni, taasi oo ku timid sida ay uga go’an tahay mabaadii’da dimoqraadiga ah iyo aasaasidda hay’ado dowladeed oo adag. Kenya iyo Somaliland waxay sii wadi doonaan inay si wadajir ah uga shaqeeyaan horumarinta nabadda iyo xasilloonida iyo raadinta barwaaqo wadaag ah.” Ayaa lagu yiri qoraalka.
Waxay sidoo kale sheegeen in saraakiil sare oo ka kala tirsan labada dowladood ay u xil-saareen inay si wadajir ah uga shaqeeyaan hab loo hormarin karo heshiiska guud ee iskaashiga qodobo ay ka mid yihiin xiriirka labada shacab, ganacsiga iyo maalgelinta, la-dagaalanka argagixisada iyo dambiyada dhinaca internet-ka, waxbarshada iyo qodobo kale.
Previous articleKenya oo ka hadashay tallaabada Somaliya ay xiriirka ugu jartay
Next articleGolaha Midowga Musharaxiinta oo sheegay in bannaanbaxyada ku biiri doonaan